Home ၀တ္ထုတိုများ ကျွန်တော်မသိခဲ့သောနေ့
Menu	HomeGuestbookToday in HistoryNews & Blog FeedsContact Us	သံလွင်အိပ်မက် [Latest]	မျက်နှာဖုံးနှင့် အမှာစာမာတိကာစာဖတ်သူတို့ပေးစာများကဗျာများကာတွန်းများဟာသဆောင်းပါးများအက်ဆေးများဝတ္ထုတိုများပေးစာအင်တာဗျူးစာအုပ်စင်သို့ ကိုသံလွင်ဗေဒင်	သံလွင်အိပ်မက်အဟောင်းများ	အတွဲ(၄) အမှတ်(၁)အတွဲ(၃) အမှတ်(၄)အတွဲ(၃) အမှတ်(၃) (အထူးထုတ်)အတွဲ(၃) အမှတ်(၂)အတွဲ(၃) အမှတ်(၁)အတွဲ(၂) အမှတ်(၃)အတွဲ(၂) အမှတ်(၂)အတွဲ(၂) အမှတ်(၁)အတွဲ(၁) အမှတ်(၁၁)အတွဲ(၁) အမှတ်(၁၀)အတွဲ(၁) အမှတ်(၉)အတွဲ(၁) အမှတ်(၈)အတွဲ(၁) အမှတ်(၇)အတွဲ(၁) အမှတ်(၆)အတွဲ(၁) အမှတ်(၅)အတွဲ(၁) အမှတ်(၄)အတွဲ(၁) အမှတ်(၃)အတွဲ(၁) အမှတ်(၂)အတွဲ(၁) အမှတ်(၁)	ယနေ့1171မနေ့က1303တစ်ပတ်အတွင်3း925ယခင်သတင်းပတ်က11734တစ်လအတွင်3း5443ယခင်လက72912စုစုပေါင်း2885850Visitors Counter	Join us in Facebook Facebook Fanbox 1.5.x.0	ကျွန်တော်မသိခဲ့သောနေ့	Views : 1964 Favoured : 80
ဒီနေ့ ဆေးစစ်ထားတာ အဖြေသွားယူရမယ့်နေ့ပဲ ... ။ အလုပ်ရှင်ဆီက ခွင့်တောင်းပြီး အလုပ်ကနေ စောစော ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ် ...။ မနေ့က ညနေက မိုးနည်းနည်းမိသွားလို့ ဖျားချင်သလိုလို ဖြစ်နေပြီး ... လူက နဲနဲနုံးနေတယ် ...။ အခုတလော နဲနဲလေး အအေးမမိလိုက်နဲ့ အဖျားက၀င်ဝင်လာပြီး ခေါင်းတွေကိုက်ကိုက်လာ တာ ဒါပါနဲ့ဆို လေး၊ ငါးခါလောက်ရှိနေပြီ ...။ ဘယ်လိုဖြစ်တယ် မသိပါဘူး ...။ ရထားတစ်တန်၊ ကားတစ်တန် စီးအပြီး မှာ ဆေးစစ်ထားတဲ့ ဆေးခန်းကိုရောက်သွားတယ် ...။ ဒီနေ့က ဆေးစစ်ချက် အဖြေ Result ယူရုံပဲဆိုတော့ စောင့်စရာ မလိုတော့ဘူးလို့ တွေးမိပြီး ကောင်တာက ကောင်မလေးကို ဘောင်ချာလေးလှမ်းပေးလိုက်တယ် ...။ ကောင်မလေးက ဘောင်ချာကနံပါတ်နဲ့တိုက်ပြီး ကျွန်တော့်အတွက် Result တွေကိုလိုက်ရှာပေးနေတယ် ...။ ဟော ... သူတွေ့သွားပြီထင်တယ် ... ။ ကောင်မလေးက အဖြေစာရွက်ထုတ်လေးကိုကိုင်ပြီး စာအိတ်ပေါ်က မှတ်ချက်လေးတွေကို ဖတ်နေတယ် ...။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကိုလှမ်းပြောတယ် ...။
သူ ဘာတွေ ပြောနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်ပါပဲ ... ။ သူပြောနေတာတွေကို စိတ်မ၀င်စားနိုင်အားအောင်ကို ကျွန်တော်ရဲ့အာရုံထဲမှာ ... ငါ့မှာ HIV ရောဂါပိုးတွေ့လို့များ သူ ဒါတွေလာပြောပြနေတာလား မသိဘူးဆိုတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုက နေရာယူထားလိုက်ပြီလေ ...။ အဲဒါကြောင့်ပဲ သူ စကားစ နည်းနည်း ပြတ်သွားတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ကျွန်တော် အမြန်အမြန်ပဲ မေးလိုက်တယ် ...
အထက်ပါဝတ္ထုတိုကို နေဘုန်းလတ်က သူ၏ ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော် ဘလော့ဂ်တွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့၌ ရေးသားခဲ့ပါသည်။	Users' Comments Average user rating
Display2of2comments	1. 01-08-2012 00:50
့ရတော့ ပထမတော့ အံ့သြမိတယ်
။ ကျွန်မလဲ တစ်ခါကကျော
တာလေး ရှိတယ်။ ကိုနေဘုန်း
လတ်ရဲ့ blog မှာရေးထားက
နောက် ကြိုက်လို့ ဒီမှာနောက်
နရီ	2. 22-09-2011 17:36
စာဖက် ပြီး စ်ိတ်မကောင
်းဖြစ် မိတယ် လူငယ် တစ်ယောက်ရဲ
က်တွေ အတွက် ကိုယ်ချင်း
စာမိ လိုပါ Guest
sithuhlaing	Display2of2comments
Add your commentmXcomment 1.0.8 © 2007-2013 - visualclinic.frLicense Creative Commons - Some rights reserved	ကျွန်တော်မသိခဲ့သောနေ့	Friday, 16 April 2010 15:02	Currently 3.00/5 12345 Rating 3.0/5 (25 votes) < Prev